Semalt - SEO चट्टानहरू!
Semalt - एसईओ चट्टानहरु! केहि समयको लागि, तर यस वर्ष, नम्र वेबसाइट अझ आवश्यक भएको छ।
तथापि, केवल एक वेबसाइट सुरू गर्नु सम्पूर्ण संसारको अधिकांश व्यवसायका लागि पर्याप्त छैन। बटनको क्लिकमा प्रतिस्पर्धा उपलब्ध हुन्छ।
ध्यान पाउन, मानिसहरूलाई तपाईंले आफू को हो र के गर्नुहुन्छ भनेर जान्नु आवश्यक छ, खोजी इन्जिनहरू पहिलो स्थान भएको साथ। तिनीहरूले देख्नेछन्।
त्यहाँ यही एसईओ आउँछ र किन यो चट्टानहरूमा पर्छ।
एसईओ सक्छ गुगल खोजी परिणामहरूको तल बस्नबाट एक वेबसाइट लिनुहोस्, सबै तरिका बाट शीर्षमा। यसले भीडबाट व्यवसाय खडा गर्न सक्छ र सही अनलाइन दर्शकहरूको अगाडि सही समयमा देखा पर्न सक्छ।
तर धेरै व्यक्तिको लागि SEO एक हो रहस्य
यो यद्यपि त्यस्तो हुनु हुँदैन। केही विशेषज्ञको मद्दतले, एसईओ एक शक्तिशाली मार्केटिंग उपकरण बन्न सक्दछ, र सबै व्यवसाय मालिकहरूले उनीहरूको वेबसाइटको लागि विचार गर्नुपर्छ।
थप जान्न चाहानुहुन्छ? SEO कसरी काम गर्छ र यसले तपाईंको लागि के गर्न सक्दछ भन्नेमा गहिरो डुबुल्की लिनुहोस्।
SEO को हो?
ठीक छ, तपाइँ अब SEO को बारे मा केहि अधिक थाहा छ र कि यो एक अनलाइन उपस्थितिको लागि चमत्कार गर्न सक्छ। तर तपाइँ अझै पनी सोचिरहनु सक्नुहुन्छ, "के यो मेरो लागि हो?"
तपाईलाई कस्तो प्रकारको व्यवसाय छ भन्ने फरक पर्दैन, यदि तपाई अनलाइन हुनुहुन्छ र तपाई अधिक सम्भावित ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्न चाहानुहुन्छ भने एसईओ तपाईका लागि बिल्कुल नै हो।
यहाँ कार्यको SEO को एक उदाहरण हो।
A कस्मेटिक र प्लास्टिक सर्जरी कम्पनी टर्कीमा एसईओ मार्फत वेब ट्राफिक बढाउन चाहान्थ्यो। उद्देश्य भनेको व्यवसायको प्रोफाइल बढाउनु र बेलायतको बजारमा बिक्री बढाउनु थियो।
लक्ष्य प्राप्त गर्न क्लिनिकले एसईओ विशेषज्ञलाई काममा लगायो जसले अन्य एसईओ टेक्निकको साथसाथ वेबसाइटको लागि अनुपम सामग्री सिर्जना गर्‍यो।
छ महिना भित्र, वेब ट्राफिक १,4544 प्रतिशतले वृद्धि भयो र वेबसाइटले यसलाई शीर्ष -१० मा बनायो सर्च ईन्जिन परिणाममा कस्मेटिक र प्लास्टिक सर्जरी क्वेरीहरूको लागि। अझ राम्रो, क्लिनिकमा उपस्थिति १ times गुणाले बढ्यो।
अभियानको सफलताले ग्राहकको लागि व्यवसायको बृद्धि भयो र नयाँ क्षेत्रहरूमा तिनीहरूको सेवाहरूको विस्तार गर्‍यो।
के यो एसईओ विशेषज्ञहरूको सहयोग बिना प्राप्त गर्न सकिन्छ? हुनसक्छ तर यसले समान परिणामहरू प्राप्त गर्न लामो समय र धेरै प्रयास लिने थियो।
किन SEO विशेषज्ञहरूसँग काम गर्ने?
हामीले भर्खरै पत्ता लगायौं कि विशेषज्ञहरूसँग काम गर्दा धेरै फाइदाहरू हुन्छन्।
किनभने विशेषज्ञ बन्न सकिन राति हुन सक्दैन। शिल्प सिक्न र ज्ञान प्राप्त गर्न यसले समय लिन्छ।
एक गाडी भाँच्ने बारे सोच्नुहोस्। मानिसहरूले प्राय: के गर्छन्? तिनीहरू मेकानिक भन्छन् किनभने तिनीहरूसँग विशेषज्ञता वा समस्या समाधान गर्न समय छैन, तर मेकानिकले गर्छ।
मेकानिकले प्रशिक्षण पूर्ण गरे र प्रयोग भएको छ। ती सीपहरू दैनिक आधारमा सबै प्रकारका समस्याहरू ठीक गर्न। यही कारण हो कि उसलाई वा उनीहरुका फिल्डमा उनी विशेषज्ञ बनाउँदछ।
समान एसईओमा लागू हुन्छ।
जो कोही यसको बारे पढ्न र एसईओ प्रविधिको कार्यान्वयन गर्न को लागी प्रयास गर्न सक्दछ। तर अनुभव र यो कसरी वास्तव मा काम गर्दछ ज्ञान बिना, यो सफल हुन संभावना छैन। वा एकदम थोरैमा, यो समय-उपभोगी हुनेछ।
बरु, एसईओ विज्ञहरूसँग काम गर्दा प्रक्रिया सरल र सजिलो नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ - छिटो।
Semalt एक पूर्ण-स्ट्याक डिजिटल एजेन्सी हो जुन एसईओ, आईटी र मार्केटिंगमा विज्ञहरूको टोलीले निर्माण गरेको हो। तिनीहरूको उद्देश्य भनेको अनलाइन व्यवसायलाई सफल बनाउनको लागि ग्राहकहरूलाई उनीहरूको वेबसाइटहरू धेरै जसो एसईओ उपकरणहरू र प्राविधिकहरूको माध्यमबाट बनाउन मद्दत गर्दछ।
एक दशकको लागि, Semalt छ युक्रेनको किभमा रहेको यसको मुख्यालयबाट विश्वभरका ग्राहकहरूसँग काम गरिरहेका छन। त्यस समयमा, 5,000००० भन्दा बढी वेबसाइटहरू Semalt को SEO समाधानहरू प्रयोग गरेर Google खोजी परिणामहरूको शीर्षमा पुग्न अनुकूलित गरियो।
Semalt ले प्रदान गर्ने मुख्य सेवाहरू यहाँ छन्। :
उन्नत विश्लेषण सेवाहरू
यी सबै Semalt को दुई मुख्य समाधानको वरिपरि आधारित छ SEO को ग्यारेन्टी गर्न - AutoSEO र FullSEO।
आउनुहोस् के समावेश छ मा हेर्नुहोस् र कसरी यी एसईओ उपकरणहरु को साथ शुरू गर्ने।
Semalt को SEO समाधान
AutoSEO र FullSEO दुबै ग्राहकहरु को लागी सकारात्मक नतीजा प्राप्त गर्न डिजाईन गरीएको छ।
भिन्नता यो छ कि AutoSEO छोटो अवधिको उद्देश्य वा SEO शुरुवातको उद्देश्य हो। जबकि फुलसेओले अधिक उन्नत एसईओ प्रविधिको प्रयोग गर्दछ र दीर्घकालीन व्यापार परियोजनाहरू, ई-वाणिज्य कम्पनीहरू र उद्यमीहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो।
साना व्यवसायहरूका लागि जुन साइट ट्राफिक बढाउन चाहान्छन् तर उनीहरूले वास्तविक नतिजा नदेखे सम्म ठूलो लगानी गर्न चाहँदैनन् < AutoSEO मा जाने उत्पाद हो। विशेष गरी Semalt ले यस समाधानको साथ १०० प्रतिशत प्रभावकारिताको कबूल गर्दछ।
त्यसोभए, यसले कसरी काम गर्दछ?
AutoSEO तपाईंको वेबसाइटको हालको स्थितिमा रिपोर्टको साथ शुरू हुन्छ, अलि अडिट जस्तो। त्यसो भए, एसईओ विशेषज्ञले त्रुटिहरू पहिचान गर्न र सुधार गर्न पूर्ण विश्लेषण पूर्ण गर्दछ।
अर्को, एसईओ ईन्जिनियरहरूले ट्राफिक-उत्पादन कुञ्जी शब्दहरू छान्छन् जुन काम गर्दछ प्रासंगिक छ। व्यापार को आला। एक पटक त्यो स्थापित भएपछि र कुञ्जी शब्दहरू वेबसाइटमा वितरित भएपछि, Semalt को टेक्नोलोजीले प्रासंगिक वेब स्रोतहरूमा ब्याकलिks्क निर्माण गर्न सुरू गर्दछ।
अन्तमा, AutoSEO ग्राहकहरूले दैनिक अपडेटहरू प्राप्त गर्छन् कसरी पदोन्नत कीवर्डहरू रैंकिंग गर्दै छन्, साथै नियमित विश्लेषणात्मक रिपोर्टहरू पनि।
Semalt को पूर्ण एसईओ एक एकीकृत समाधान हो ठुलो व्यवसाय वा धेरै कम्पनीहरूको व्यक्तिहरूका लागि। यो AutoSEO भन्दा पनि महँगो छ, त्यसैले यो उनीहरूको लागि हो जुन अधिक पैसा खर्च गर्न अधिक विकसित उपकरणमा लगानी गर्न इच्छुक छन्।
पूर्ण एसईओ AutoSEO मा यस्तै सिद्धान्तहरू अनुसरण गर्दछ, तर समाधानहरू गहन विश्लेषण र प्रतिस्पर्धीहरूको समीक्षामा आधारित छन्। फुलसेओले पनि उच्च रूपान्तरण दरको साथ महत्वपूर्ण वेबसाइट ट्राफिक वृद्धिको ग्यारेन्टी दिन्छ।
फुलएसईओ समाधानको अंशको रूपमा, Semalt ले सुनिश्चित गर्दछ कि वेबसाइट पूर्ण रूपमा SEO मानकसँग अनुरूप छ। यो द्वारा गरिन्छ:
फुल एसईओको अन्य फाइदाहरूमा वेबसाइट विकास र मूल एसईओ-मैत्री सामग्रीको सिर्जना समावेश छ।
मूल रूपमा, फुलसियो गुगल खोजी परिणामहरूमा शीर्ष स्पटहरूमा वेबसाइट पठाउन डिजाइन गरिएको हो।
वेबसाईट एनालिटिक्स प्रयोग गरेर
Semalt समाधानको सफलताको मुख्य घटक भनेको प्रत्येक व्यक्तिगत ग्राहकको लागि सेवालाई दर्जी गर्न एनालिटिक्सको प्रयोग हो।
तथापि, शब्द "वेबसाइट विश्लेषण" ले भ्रम पैदा गर्न सक्छ, त्यसैले यसको अर्थ के हो र प्रसंस्करण Semalt मा कसरी काम गर्दछ भन्ने बारे द्रुत हेरौं।
वेबसाइट एनालिटिक्स डिजिटल मार्केटिंगको प्रभावकारिता निगरानी गर्न र तपाईंको व्यापार र मुख्य प्रतिस्पर्धीहरूको बजार स्थिति ट्र्याक गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ।
तर यो किन महत्त्वपूर्ण छ?
पूर्ण अनुभवी बुझ्नको लागि नियमित अनुगमन आवश्यक छ। एक व्यापार बजार, को लागी आलान को लागी ठूलो वा सानो हो।
मुख्यतया, वेबसाइट विश्लेषकले प्रासंगिक खोजशब्दहरू स्थापना गर्न र प्रदर्शनमा नजर राख्न मद्दत गर्दछ। तर यो ताजा अवसरहरू पहिचान गर्न पनि उपयोगी छ, जस्तै क्षेत्रीय आधारमा ब्रान्ड विकास, वा उत्पादन वितरणको लागि नयाँ अवसरहरू।
Semalt मा, टोलीले सबै विश्लेषणात्मक प्रयोग गर्दछ। वेबसाइटहरूको विकास ट्र्याक गर्न र कुनै पनि सम्भावित अवरोधहरू पहिचान गर्नका लागि डाटा आवश्यक छ। वेबसाइट एनालिटिक्स एसईओ पजलको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो र विशेषज्ञको सहयोगमा यो साइटलाई एक प्रभावकारी व्यवसायिक उपकरणमा रूपान्तरण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसैले एसईओ चट्टानहरू।
एसईओ को साथ शुरू गर्दै
अब जब तपाइँ एसईओ र वेबसाइट एनालिटिक्स मा क्र्यास कोर्स गर्नुभयो, तपाइँ सायद यस्तो सोचिरहनुभएको छ कि यो कस्तो छ Semalt को साथ काम गर्न।
पहिले, Semalt एक वैश्विक कम्पनी हो जुन बहुभाषी टोलीसँग अंग्रेजी, फ्रान्सेली, इटालियन र टर्की भाषा बोल्ने अन्य भाषाहरूमा छ।
दोस्रो, AutoSEO को साथ सुरू गर्नु एकदम सजिलो र सस्तो छ १ just-दिनको परीक्षणसँग मात्र $ ०.99 for मा। तपाइँ एक महिना, तीन महिना, छ महिना वा एक वर्ष चलाउन योजना छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यो फुलसेओमा जानु भन्दा पहिले एसईओ विशेषज्ञताको स्वाद नमूना गर्ने राम्रो तरिका हो।
अन्तमा, Semalt ले ग्राहक समर्थन २ 24/7 प्रस्ताव गर्दछ, जसको मतलब यो हुन्छ कि तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ विश्व, तपाइँ टोलीको सदस्यलाई मद्दत र सल्लाहका लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं टीमलाई अनलाइन भेट्न पनि सक्नुहुनेछ हाम्रो बारेमा पृष्ठ वेबसाइटमा।